Xeer Ilaaliya Qaranka Soomaaliya oo ka hadlay rasaastii ka dhacday agagaarka Guriga Shiikh Shariif – Xorriya Online
Xeer Ilaaliya Qaranka Soomaaliya oo ka hadlay rasaastii ka dhacday agagaarka Guriga Shiikh Shariif
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud
Xeer Ilaaliyada Guud ee Qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa beeniyey eedeymaha sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidanka Booliska Dowladda Soomaaliya uu rasaas ku furay difaaca koowaad ee hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay Madaxweynihii hore ee Somalia Shiikh Shariif Shiikh Axmed.
“Gaariga la sheegay inuu Xabad huwiyay ilaalada Madaxdwaynihii hore Mudane Sheekh Shariif, waa gaari Police ah oo ilaaladaydu saarneynd. Labo gaari oo yaryar oo wadada ku sheekaysanayay wadadana xirtay kadibna gaarigii Police sanka u soo galiyay gawaaridooda ayaa keentay halka xabo ee dhacday. Waxaa caddaynayaa wax intaas ka wayn inaysan jirinin cid weerartay ilaalada Madaxwayne Sheekh Shariifna aysan jirin” ayuu yiri qoraalkiisa ku yiri Xeer Ilaaliya Qaranka.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlawe oo deg deg looga yeeray Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeybgalay shir ku saabsan aagga ganacsiga xorta ah ee Afrika
Guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo guddoon doortay
Somaliland oo war yaab leh kasoo saartay bixitaanka ciidamada Mareykanka
Golaha musharaxiinta madaxweynaha oo sheegay in boob lagu haayo hantida qaranka
Wasiirkii maaliyadda ee Austria oo xabsiga loo taxaabay, sababtu waa maxay?
Shirkii go’aanka adag laga filaaye ee golaha wasiirada oo mar kale la baajiyay